Entsha iHlaziywayo kunye neKhabhinethi ye-A-Frame yezinja
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMadison
I-Olive A-Frame yindlwana esanda kulungiswa ePayson, eArizona! Imizuzu nje engama-90 ukusuka ePhoenix, wena kunye nosapho lwakho ningakwazi ukubalekela kule A-Frame yokubaleka ezintabeni! Ikhabhinethi ikufuphi nokunyuka intaba, ukuloba, iindawo zokutyela, iivenkile nokunye. Kwikhabhathi yonwabele ukusela ikofu kwidesika, ukudlala imidlalo, ukupheka ekhitshini eligcweleyo, okanye ube nomlilo ovuthayo kwenye yemigodi emibini yomlilo. Asinakulinda ukuba uze wenze iinkumbulo apha!
Xa ufika kwi-Olive A-Frame ungapaka kwindlela yethu yokungena elingana neemoto ezintathu. Idesika yangaphambili inezitulo ze-adirondack apho sithanda ukusela ikofu kwaye sibukele amahashe ngaphaya kwendlela okanye sisele iwayini kwaye sibukele ukutshona kwelanga. Kukwakho nendawo yokucima umlilo ngaphambili. Indawo yokungena engundoqo inephedi yombane ukuze ube lula ukuzijonga.
Xa ungena kwi-cabin uya kuba kwigumbi lokutyela. Le ndawo ikulungele ukudibana nosapho + lwakho nabahlobo ukonwabela isidlo okanye ukudlala imidlalo. Ukuba ufuna indawo yokuhlala ngaphezulu kukho ibhentshi enokuthi iziswe ukuze ilingane u6 etafileni. Kukwakho nekhabhathi enewasha kunye nesomisi uya kuba nokufikelela kuyo ngokunjalo.
Ukusuka kwigumbi lokutyela kukho ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo iimbiza, iipani, iKeurig, itoaster, izinongo, ioveni kunye nemicrowave. Ikhitshi lethu alinaso isixhobo sokuhlamba izitya. Ikhitshi livula kwigumbi lokuhlala apho uya kufumana i-sofa ekhululekile, izitulo, indawo yomlilo kunye ne-smart TV. Umabonwakude weYoutube uza kufakwa ukuze usebenzise kwaye ungangena kwezinye iiakhawunti zakho. Kwikhonsoli yeTV kukho iithoyi zabantwana, imidlalo kunye neepuzzle. Igumbi lokuhlala linesilayidi esithanda ukusivula ukuze kungene umoya omtsha kunye nokukhanya okuninzi kwendalo!
Kukho amagumbi amabini okulala kumgangatho ongezantsi omabini aneebhedi ze-queen. Ikhabhathi inegumbi lokuhlambela elinye elibekwe kumgangatho osezantsi onebhafu kunye neshawari, iitawuli ezininzi, kunye neemveliso eziLungileyo zoLuntu onokuthi uzisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
Izinyuko ezijikelezayo zikuthatha zikuse kwindawo ephezulu. Phezulu kwigumbi eliphezulu yenye ibhedi yokumkanikazi kunye nebalcony.
Ngasemva kwendlu ungafumana igrill, itafile yepikiniki, kunye nomnye umgodi womlilo. Indawo yangasemva ibiyelwe ngokupheleleyo.
Ezinye izinto ekufuneka uziqaphele:
Ikhabhathi ibekwe ebumelwaneni kwaye sinabamelwane abahlala kufutshane macala omabini. Sibabulela kakhulu abamelwane bethu kwaye siyanicela ukuba nibahloniphe kwaye niwaqaphele amazinga engxolo ebusuku.
Abantwana bamkelekile kwikhabhinethi, kodwa ikhabhinethi isenokungafanelanga abantwana abancinci ngenxa yendawo yomlilo yangaphakathi kunye nezitepsi ezijikelezayo - abazali kufuneka basebenzise ingqiqo yabo xa bebhukisha.
Sineyona WIFI ibalaseleyo esikwaziyo ukuyifumana kwindawo yethu, kodwa ukusasaza izixhobo ezininzi kunokwenza i-WIFI ibonakale kwaye icothe.
Umgangatho ophezulu womgangatho uvulekile kwaye ubucala. I-loft ishushu ngakumbi kunendlu yonke, nkqu ne-insulation entsha efakwe kutshanje. Kukho fan yomgangatho kwi-loft eneseto ezininzi esicebisa ukuba sisebenzise.
Asiboneleli ngeenkuni kwaye sicebisa ukuba ufumane kwisikhululo segesi okanye ivenkile ngokubanzi ezantsi kwesitrato, kodwa ngamanye amaxesha iindwendwe ezidlulileyo ziyakushiya ngasemva!
Sinobuhlobo bezinja kunye nobuninzi bezinja ezimbini kwaye kukho umrhumo wesilwanyana-nceda ubone imithetho eyongezelelweyo ngolwazi oluthe kratya.
Akukho ndawo yokupaka ezitalatweni ngoNovemba 1st-Aprili 1st. Kusenokubakho izithintelo zomlilo unyaka wonke ngenxa yeemeko ezithile zemozulu.
Ikhabhinethi yimizuzu eli-10 ukusuka kwiivenkile zokutyela, iivenkile kunye neevenkile zegrosari ePayson. Imizuzu engama-20 ukusuka kwiStrawberry / Pine kunye nemizuzu engama-45 ukusuka kwiMogollon Rim. Ikhabhinethi kwakhona 20 imizuzu ukusuka Tonto Natural Bride State Park. Iindlela zokuhamba njengeeNgxangxasi zamavili aManzi zilapha ezantsi kwendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Madison
Andizi kufumaneka ngokobuqu kodwa ndiza kusoloko ndifumaneka ngeApp ka-Airbnb okanye ngefowuni.